Bitcoin कोर को नयाँ संस्करण पूर्ण SegWit-ठेगाना समर्थन - Blockchain समाचार
फेब्रुअरी 20, 2018 व्यवस्थापक
Softfork SeqWit गत वर्ष अगस्ट मा नेटवर्क Bitcoin मा भयो र, hardfork विपरीत, मतलब थिएन सबै सहभागीहरू द्वारा अनिवार्य प्रयोग. scalability को मामला मा SegWit को लाभ बावजुद, र एक परिणाम रूपमा – आयोग को कमी, आम ग्रहण हुन भएन, र Bitcoin गरेको blockchain मा आज SegWit-लेनदेन अप बस भन्दा बनाउन 13%.
मुख्य समस्या लागि SegWit ठेगाना सिर्जना को जटिलता छ “uninitiated”, जबकि यो प्रविधि लागू लागि मुख्य सर्त छ: SegWit-लेनदेन प्रेषकलाई र प्राप्तकर्ता SegWit-ठेगाना छ भने मात्र गर्न सकिन्छ.
द्वारा को Bitcoin कोर विकासकर्ताहरूले जारी प्रकाशित 0.16.0 कोड सजिलो मुख्य ग्राहक मा SegWit-ठेगाना सिर्जना बनाउँछ, Bitcoin कोर. यसका लागि, SegWit आदेश लाइन र वालेट इन्टरफेस थपिएको थियो. इन्जिनियर Chaincode ल्याब र Bitcoin कोर टीम मार्को Falke को सदस्य SegWit-ठेगाना सिर्जना वालेट को अघिल्लो संस्करणमा सम्भव थियो कि उल्लेख, तर यो प्रक्रिया थियो “बरु अप्ठ्यारो” र “ज्यादातर लुकाइएको छ।” अब SegWit ठेगाना पूर्वनिर्धारित सेट गरिनेछ.
साथै, यो समर्थन पहिलो संस्करण हो “मूल SegWit-ठेगाना” – bech32 – विकासकर्तालाई पत्रुस Vuille र ग्रेगरी मैक्सवेल द्वारा शुरू. परम्परागत bitcoins तुलनामा, bech32 थप छ “प्रयोगकर्ता मैंत्री” र पनि स्वतः SegWit समर्थन. मार्को Falke अनुसार, यो हो “रिलीज को सबैभन्दा रोचक भाग।”
चौधरी को bech32 ढाँचा कम शुल्क प्रदान गर्दछ टिप्पणी, तर सबै भन्दा पर्स यसलाई अझै समर्थन छैन. विकासकर्ता SegWit ठेगाना को स्वचालित सिर्जना कम आयोगहरु गर्न मद्दत गर्नेछ आशा. अन्य नवाचारै पनि वालेट को लचीलापन वृद्धि उद्देश्य छन्.
क्षणमा SegWit बजार सहभागी एक अपेक्षाकृत सानो नम्बर समर्थन, तर आफ्नो नम्बर noticeably बढ्दै छ. आज, तिनीहरूलाई बीच पर्स छन् BitGo, सुरक्षित, लेजर, Electrum, Samourai वालेट, GreenAddress, खुला बजार, MSIG, किनारा, Keepke, HitBTC, BTC.com, क्राकेन, ShapeShift, Bitstamp र Bitso, साथै Bitrefill र CoinGate भुक्तानी सेवाहरू. इरादा को पहिलो क्वाटरमा SegWit ठेगाना थप्न 2018 सबै भन्दा ठूलो पर्स को एक द्वारा पहिले नै रिपोर्ट गरिएको छ Blockchain.info, र प्रारम्भिक फेब्रुअरी, को कोइनबेस विनिमय यो प्रविधि परीक्षण अन्तिम चरण मा छ कि घोषणा, र यो चाँडै प्रयोगकर्ता लागि उपलब्ध हुनेछ.
अघिल्लो जारी हुनत 0.15.1 पनि पर्स मा SegWit समर्थन विस्तार गर्ने उद्देश्य थियो, विकासकर्तालाई वैकल्पिक SegWit2x सफ्टवेयर को सुरूवात अस्थायी रूपमा गतिविधिहरु को ध्यान सारे भनेर दावी. SegWit ठेगाना लागि पूर्ण समर्थन को सुरूवात सौतेली थियो एक कारण, चौधरी अनुसार, टोलीमा SegWit नेटवर्कमा कसरी काम गर्छ हेर्न चाहेको छ, र निश्चित कुनै संवेदनशीलता छन् बनाउन.
फिलिप मा Unionbank ...
अघिल्लो पोस्ट:स्विस नियामक IČO लागि आवश्यकताहरु विकास
अर्को पोस्ट:एक नयाँ Cryptocurrency बस बाहिर आयो, त्यो रूपमा Bitcoin रूपमा बोल्ड छ